ကြည့်ရှုသူနှုန်းမြင့်တက်ပြီး လူကြိုက်များခဲ့လို့ SEASON အသစ် ထပ်မံ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ drama (10) ခု – BaHuTuTa
ကြည့်ရှုသူနှုန်းမြင့်တက်ပြီး လူကြိုက်များခဲ့လို့ SEASON အသစ် ထပ်မံ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ drama (10) ခု
July 14, 2021 admin Cele, International, K Waves 0
ကြည့်ရှုသူနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့လို့ SEASON အသစ် ထပ်မံ ရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ drama (10) ခု
ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများဟာ ဇာတ်ရှိန်ကောင်းသည့် အချိန်မှာ အဆုံးသတ် သွားတတ်တာကြောင့် လှည့်ကွက်များကို ပိုမိုမြင်လိုတဲ့ ပရိသတ်များက နောက်ထပ် Season ကို မျှော်လင့်တတ်ကြပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပေးမှာက ပရိသတ်များအကြိုက် လူကြိုက်များတောင့်ပြီး မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း Season အသစ် ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ season တိုးဖားပေးတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းများ (၁၀) ခု ဖြစ်ပါတယ်။
‘Voice’ ဟာ Season3အထိ ပြသထားပြီးဖြစ်ပြီး အခုလက်ရှိမှာ Season4ကို ထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူများရဲ့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများကို ဖြေကြားရင်း သူတို့ကြားတဲ့ အသံတွေနဲ့ ရာဇ၀တ်မှုတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့ အရေးပေါ် ခေါ်ဆိုမှုစင်တာမှ ၀န်ထမ်းများအကြောင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Seasonအကုန်လုံး အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် ။
2. The Penthouse: War in Life
ခန်းနားတဲ့ အိမ်ယာမှာနေထိုင်ရင်း ထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုအတွက် ရပ်တည်လိုကြတဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော မိသားစုများရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီး လူကြိုက်များလှတာကြောင့် လက်ရှိတွင် Season3ထိ ရိုက်ကူးဖြစ်နေပြီး ထုတ်လွှင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ် ။
‘Reply’ စီးရီးဟာ ၎င်းရဲ့ ခေတ်ဟောင်းပုံစံကို ထူးခြားတဲ့ ပုံစံနှင့် လူငယ်သဘာ၀ရဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ ခံစားမှုများကို ဖော်ပြထားကြောင့် လူကြိုက်များကြပါတယ်။ Season တစ်ခုစီမှာ သရုပ်ဆောင် အပြောင်းအလဲများနဲ့ ရိုက်ကူး ပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ Season3ခုကတော့ ‘Reply 1997’ ၊ ‘Reply 1994’ နှင့် ‘Reply 1988’ တို့ဖြစ်ပဲပါတယ်။
Kingdom ကတော့ Netflix ထုတ်လုပ်ရေးရဲ့ ကိုးရီးယားနဲ့ ပထမဆုံခြေလှမ်း drama ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားရဲ့ Joseon အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့ သမိုင်းဝင်နေရာနှင့် ဖုတ်ကောင်များကို ပေါင်းစပ်ပုံဖော်ထားပါတယ်။ 2019 နှင့် 2020 မှာ Season ၁နှင့် ၂ အထိပြသခဲ့ပြီး လူကြိုက်အလွန်များခဲ့တာကြောင့် ယခုနှစ် ဇူလိုင်လ 23 ရက်နေ့မှာ Season3ဖြစ်တဲ့ ‘Kingdom: North of Ashin’ ကို စတင်ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. Hello, My Twenties!
‘Age of Youth’ ဆိုပြီး လူသိများတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းမှာ အတူနေထိုင်ကြတဲ့ မိန်းကလေး ၅ဦးရဲ့ ဘဝအကြောင်းများနှင့်အသက်၂၀အရွယ်မှာ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတဲ့ ရုန်းကန်မှုများကို ရသမျိုးစုံ ပြသထားပြီး 2016 , 2017 ခုနှစ်မှာSeason2အထိ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြသပါတယ်။
6. Dr. Romantic
‘Romantic Doctor Teacher Kim’ စီးရီးဖြစ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Season 1 ကို 2016 မှ 2017 ခုနှစ်အထိ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ အတိတ်က လူမသိတဲ့ပြသနာများတချို့ရှိနေတဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးချွန်တဲ့ ဘဝကို ပုံဖော်ပြသထားပါတယ်။ လူကြိုက်အရမ်းများတာကြောင့် 2020မှာာ Season2မှာလည်း ဆရာဝန်အသစ် နှစ်ဦးကို သူ့အဖွဲ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရိုက်ကူးထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ် ။ဒီတစ်ကြိမ်လည်းအရမ်းလူကြိုက်များပါတယ်။ ပရိသတ်တွေကတော့ ဆက်လက်ပြီး ရိုက်ကူးပေးဖို့မျှော်လင့်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။
7. Partners for Justice
‘Partners for Justice ‘ ဟာ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ မှုခင်းဆရာ၀န်တစ်ဦးနှင့် လူသစ် ရှေ့နေတစ်ဦးတို့အတူ ရာဇ၀တ်မှုများကို ဖြေရှင်းကြတဲ့ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။ စီးရီးကို 2018 နှင့် 2019 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး Season2အထိ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ၂နှစ် ကာလအတွင်း ဆုပေါင်းများစွာ ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
8. Arthdal Chronicles
ရှေးကျတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို လူနေမှုပုံစံကို ဖော်ပြထားပြ Arth လို့ခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းတိုင်းပြည်က Arthdal ​​မြို့သားတွေက အာဏာအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြတာကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Season 1 ကို 2019 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး Season2အတွက် ရိုက်ကူးဖို့ စီစဉ်ကြော်ငြာထားပေမယ့် COVID-19 ကြောင့် ရိုက်ကူးမှုကို ရွှေ့ဆိုင်းထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
9. Welcome to Waikiki
ဆိုးလ်မြို့ တော် Itaewon မှာရှိတဲ့ guest house ပိုင်ရှင်လူငယ်များအကြောင်း ဟာသဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးများနှင့် ရယ်ရွှင်ဖွယ် ဇာတ်ကွက်လေးတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်များရဲ့ပီပြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ကြည့်ရှုသူများကို ပျော်ရွှင်စေကာ နှစ်သက်မှုများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ Season 1 ကို 2018 ခုနှစ်တွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး နောက်နှစ်မှာပဲ Season2ကို ထပ်မံ ထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။
love alarm ကားလေးကတော့ Phone ထဲမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရတဲ့Joalarm ဆိုတဲ့ appလေးကို တောင်ကိုရီးယားမှာ တီထွင်ထားပြီး အဲ့ဒီ joalarm ဆိုတဲ့ app လေးကို ဖုန်းထဲ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကို သဘောကျနေတဲ့လူနဲ့ ၁၀ မီတာ အကွာအဝေးလောက်မှာတင် အဲ့ဒီ app လေးဟာ အချက်ပေးပါတယ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတဲ့သူ အရေအတွက်ကိုလည်း app လေးက တွက်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ ဒီ App ကိုအခြေခံပြီး ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ Song Kang နဲ့ Kim So Hyun တို့အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်ကားလေးကတော့ season 2ထိ ထွက်ရှိထားပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူများအတွက် ဂျပန်က အရေးပေါ်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ ဒေါ်လာ ၅ ဒသမ ၈ သန်း ပေးမည်